बीएससी सीएसआईटीः कसले पढ्ने, किन पढ्ने ? « Tech News Nepal
बीएससी सीएसआईटीः कसले पढ्ने, किन पढ्ने ?
सोमबार, फाल्गुन २४, २०७७
काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रविधि मानव जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । हरेक क्षेत्रमा बढ्दो प्रयोगले यसबाट मान्छे अछुतो रहन सक्ने कुनै अवस्था पनि छैन ।
यस्तोमा यो क्षेत्रलाई डोर्‍याउने शिक्षा पद्दति पनि त्यही अनुसार विकास हुँदै गएको छ । विश्वव्यापी रुपमै पछिल्लो समय सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित औपचारिक शिक्षामा धेरैको रुची र सहभागिता देखिन थालेको छ ।
अहिले नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई समेट्ने गरी विभिन्न कोर्षहरु पढाइ भइरहेका छन् । विश्वविद्यालय अनुसार यसको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने प्रयास पनि भएको देखिन्छ ।
कम्प्युटर साइन्स, बीएससी सीएसआइटी, बीआईटी, बीसीए, ब्याचलर्स अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, बीई–आईटी, बिआईएम, बीसीआईएस, बीएड आईसीटीई जस्ता कोर्ष पछिल्लो समय नेपाली युवा पुस्ताको रोजाइमा पर्न थालेको छ ।
यस्ता कोर्षमा उपलब्ध कोटा (तोकिएको सिट संख्या) भन्दा बढीको आवेदन आउनुले पनि यस प्रतिको बढ्दो माग र रुची प्रस्ट हुन्छ । यी विषयहरु मध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले ल्याएको चार वर्षे शैक्षिक कार्यक्रम बीएससी सीएसआईटी (ब्याचलर्स इन कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी) को विषयमा आज हामी यहाँ चर्चा गर्दै छौं ।
जसलाई त्रिविस्थित सीएसआईटी केन्द्रीय विभागका प्रमुख नवराज पौडेल समय अनुसार आजको आवश्यक्ताको कोर्षको रुपमा परिभाषित गर्छन् । ‘नेपालको परिवेशमा कतिपय कोर्ष कम्प्युटर साइन्स, कम्प्युटर इन्जिनियरिङसँग नजिक छन् ।
त्यस्तै कतिपय सूचना प्रविधिसँग नजिक,’ पौडेल भन्छन्, ‘जसमा कतिपय कोर्षहरु भोकेसनल र इन्डस्ट्री बेस्ड पनि छन् । अनि केही नलेज र स्किल दुवै प्रदान गर्ने कोर्षहरु । तर, बीएससी सीएसआईटी यी सबैको फ्युजन अर्थात् सबैको मिश्रण हो ।’
कम्प्युटर सम्बन्धी दुई वटा कोर्षलाई मिलाएर बीएससी सीएसआईटीको पाठ्यक्रम तयार पारिएको हो । उनी भन्छन्, ‘बजारमा जतिबेला (बि.सं. २०६४) त्रिविले यो कोर्षको सुरुवात गरेको थियो, त्यतिबेला कि त कम्प्युटर साइन्सको कोर्ष मात्रै थियो, या त सूचना पूविधि (आईटी) को मात्रै ।
तर, हामीले बजारको आवश्यकतालाई महसुस गरेर यी दुवैलाई मिलाएर नयाँ कोर्षको रुपमा यसलाई अघि बढाएका हौं ।’ किन भने कम्प्युटर साइन्स बढी रिसर्चमा आधारित डिग्री हो ।
जुन सैबले सक्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसैले विद्यार्थीले डिग्री हाँसिल गर्दा डेभलपमेन्टमा पनि अवसर मिलोस् भनेर यसको सुरुवात गरिएको उनी सुनाउँछन् ।
भन्छन्, ‘यसो हुँदा विद्यार्थीले कम्प्युटर साइन्ससम्बन्धी ठूला रिसर्चमा पनि सहभागी हुन सक्ने भए । साथै सफ्टवेयर उद्योगमा प्रवेश गर्छु भन्दा त्यसको पनि ढोका खुल्ने भयो ।’
त्यसैले यसमा कम्युटर साइन्सका लागि आवश्यक पर्ने र आईटीका लागि आवश्यक पर्ने दुवै कोर्षलाई मिलाइएको हो । जस्तो कम्प्युटर साइन्सका लागि स्ट्रङ म्याथम्याटिक्सको आवश्यक पर्छ, स्टाटिस्टिक्स्, फिजिक्स जस्ता कोर्ष छन् भने आईटीका लागि जाभा लगायतका विषयवस्तु राखिएका छन् ।